सर्वश्रेष्ठ डरावना रोब्लक्स खेल - डिसेम्बर २०२० (सूची) - गेमि।
उत्तम डरावना रोब्लक्स खेलहरू २०२० - प्ले गर्नु पर्छ
रोब्लक्स एक विशाल विश्वव्यापी प्लेटफर्म हो जहाँ लाखौं गेमरहरू हरेक दिन जडान गर्दछन् उनीहरूको गेमि skills सीप प्रदर्शन गर्न एक इमर्सिभ, प्रयोगकर्ता-उत्पादित--आयामी विश्वमा। एक खेलाडी विश्वव्यापी कुनै पनि प्रयोगकर्ता द्वारा विकसित मन-उड़ाउने खेल खेल्न सक्छ र पनि आफ्नै खेल निर्माण गर्न र अरूलाई खेल्न साझा गर्न सक्नुहुन्छ। दुबै प्रकारका रोब्लक्समा गेमप्ले र विकासकर्ताहरूको कल्पना असीमित छन्।
रोबलोक्स २०० 2007 मा सुरू गरिएको हो र हालमा प्रत्येक महिना million 64 मिलियन खेलाडीहरू समायोजन गर्दछन् र यस प्लेटफर्ममा १ 178 मिलियन खाताहरू राख्छन्। प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई एन्ड्रोइड र आईओएसमा एक अनुप्रयोगको रूपमा डाउनलोड गर्न सक्दछन् र उनीहरूको ट्याब्लेटहरू, पीसी, एक्सबक्स वन, वा अमेजन उपकरणहरूमा खेल खेल्न सक्छन्।
सयौं बीच रोब्लक्समा खेलहरू गुच्छा भरमा, डरावना रोब्लक्स खेलहरू सबैभन्दा लोकप्रिय विधा होन, जुन तपाईंको एड्रेनालाईनलाई अर्को तहमा धकेल्न सक्दछ। त्यसोभए, यदि तपाइँ सबै समयको सर्वश्रेष्ठ रोबलोक्स डरावनी खेलको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ। यहाँ शीर्ष १० Scariest खेलहरूको सूची र तिनीहरूको केहि सुविधाहरू छन्।
हेर्दै २०२० मा निःशुल्क रोबक्स पाउनुहुन्छ? हाम्रो अनुसरण गर्नुहोस् रोबलोक्स गाइडहरू ।
सर्वश्रेष्ठ रोबलोक्स डरावना खेलहरूको सूची:
१. मरेर मौन
यो एक्शन, गोर, र हिंसाको मज्जा लिने खेलाडीहरूको लागि अन्तिम थ्रिलर गेम हो। खेल चुनौति र अवस्था को एक विशाल सरणी प्रस्तुत गर्दछ, र तपाईं केहि अप्रत्याशित बाधाहरूको सामना गर्नुहोस्। यो २०० American को अमेरिकी अलौकिक डरावनी फिल्म कहानीमा आधारित छ जुन डेड साइलेन्स नामबाट जान्छ।
यस शीर्षक भित्र धेरै गेम मोडहरू छन्। तपाईं साथीहरूसँग खेल्न सक्नुहुन्छ र खेलको पूर्ण आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं डराउने कथाहरू चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए यो तपाईंको लागि उत्तम स्थान हो। त्यहाँ बाँच्ने मोड पनि छ जसले तपाईंलाई कवच सम्बन्धी स्रोतहरू प्रस्ताव गर्दछ। खेलाडीहरूले लामो समय सम्म जीवित रहनु पर्छ।
योसँग पहिलो व्यक्तित्व परिप्रेक्ष्य (FPP) मोड छ जसमा खेलाडीहरू other सम्म अन्य खेलाडीहरूसँग खेल्न सक्छन्।
त्यहाँ १ jump जम्प स्केयरहरू छन् (major प्रमुख, ११ साधारण) 4.0.० को जम्प स्केयर रेटिंगको साथ।
यो एक सुपर डरावना साहसी रोब्लक्स खेल हो। तपाईं र तपाईंको साथी अपार्टमेन्ट भवनबाट उम्कन आवश्यक छ। यो भवनको माथिल्लो भागमा तपाईंको बाटो बनाएर डरावना छ। तपाईं पथमा आउने सबै अवरोधहरू पार गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक्स खेलको लागि धेरै आवश्यक छ, तर यो एक साथीसँग रमाईलो छ। प्रयोगकर्ताहरू डरलाग्दो समय हुन सक्छन् जब उनीहरू कोठा 70०5 मा पुग्न प्रयास गर्छन्।
तपाईले नक्सामा चारैतिर घुम्नु पर्छ र तपाईको पार्टनरको साथ सातौं तलामा पुग्नु पर्छ। तपाईंले कुनै पनि मुद्दाको सामना गर्नु हुँदैन। गेमप्ले अपेक्षाकृत ढिलो छ र तपाइँको केहि समय लिन्छ।गेमि while्ग हुँदा तपाईंसँग डिसकर्ड भ्वाइस च्याटको साथ उत्तम अनुभव हुन सक्छ।
कार्यको समायोजन, साहसिक कार्य, पहिलो व्यक्ति जासूस, र मनोवैज्ञानिक डरावनी एक कालो र भारी कथा संग जोडिएको।
यो यसको वातावरणमा धेरै विविध छ। यो खेलले दृश्यहरू र सेटि settingsहरू स्विच गर्दछ प्लेयरले कल्पना गर्न भन्दा छिटो।
The. डरावनी लिफ्ट
यो zMadZeus द्वारा विकसित एक डरलाग्दो खेल हो। लिफ्ट अनियमित फ्लोरमा रोकिन्छ, प्रत्येक फ्लोर फरक डरावनी परिदृश्य प्रस्ताव गर्दछ। नयाँ हत्यारहरू आवधिक रूपमा वर्तमान खेलमा थपिन्छन्, जसले यसलाई आकर्षक बनाउँछ। डरावनी लिफ्टको सिर्जनाकर्तासँग धेरै अन्य साइड खेलहरू पनि छन्।
यी खेलहरूको लागि आदर्श छन् जो डरावनी खेलहरूको विभिन्न पक्षहरू अन्वेषण गर्न चाहन्छन्। हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि यो उत्कृष्ट शीर्षक प्रयोग गर्नुहोस्। खेल इन्टरनेट मा अनियमित मानिस संग ठूलो रमाईलो छ।
त्यहाँ २ flo फ्लोरहरू छन्, र कठिनाई स्तर बढ्दो क्रममा प्लेयर अर्को अनियमित आधारमा अग्रिम हुनेछ।
सर्भरले एक पटकमा १० खेलाडीहरू समायोजन गर्न सक्दछ।
यो एग्रोस द्वारा विकसित एकल-खेलाडी मनोवैज्ञानिक डरावनी खेल हो। यो अनौंठो अनुहार इन-मिरर-भ्रम सिमुलेट गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो एक शानदार खेल हो जुन परिचित ओब्बी ट्रोप्स लिन्छ र विशिष्ट रूपमा प्रत्येक पटक फ्लिप गर्दछ। ऐनामा रोब्लक्समा डरलाग्दो खेलहरूको सम्भाव्यतामा ट्याप गर्दछ।
रमाईलो शुरू हुन्छ जब तपाईं कोठामा बत्तीहरू मधुरो पार्नुहुन्छ। तपाईंले आवाज सुन्न सुरु गर्नु हुनेछ र विचलित भिजुअलहरू देख्नुहुनेछ। प्रतियोगिताले बच्चाहरूलाई खेलमा प्रवेश गर्नु अघि चेतावनी दिन्छ।
यसले परावर्तनको घटना चित्रण गर्दछ। एक खेलाडीले विश्वासघात बाधा अवरोध कोर्स मार्फत नेभिगेट गर्न आवश्यक पर्दछ, पूरै विचारहरूमा आधारित हुन्छ जुन चुनौतीहरूको नयाँ सेटमा सजिलै पार गर्न सकिन्छ।
अन्तिम खेल स्क्रिप्टले १०००+ लाइनको कोडहरू समावेश गर्दछ, जुन कोर स्क्रिप्टको विस्तार हो। यसले निर्धारण गर्दछ कि कसरी एक खेलाडीले ऐना साइडमा लुकाइएको भागहरू लुकाउन वा देखाउन सक्छ र भाग गुणहरू हेरफेर गर्दछ।
Alone. अन्धकार घरमा एक्लो
यो एउटा डरलाग्दो, नाटकीय डरावनी खेल हो जहाँ एक निजी अन्वेषक एउटा क्रूर सवारी हत्याको छानबिन गर्न सानो शहरको भ्रमण गर्दछ र एउटा परिवारको बारेमा अन्धकारको रहस्य पत्ता लगाउँदछ। अँध्यारो घरमा एक्लो नै वास्तविक सम्झौता हो जब यो रोब्लक्स डरावना खेलहरूमा आउँदछ।
यो भर्खरको खेल हो, र तपाईं भयha्कर दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो समुदायमा धेरै लोकप्रिय छ। तपाईं कथा को माध्यम मा गए पछि लाभ को टन को मजा लिन सक्नुहुन्छ। यो रोचक छ।
यो खेल विडंबना हो किनभने यसले एक पटकमा २० प्लेयरहरू खेल्न अनुमति दिन्छ, र तपाईं एक्लो हुनुहुन्न।
एक खेलाडीले आफ्नो कामको कठिनाइको आधारमा बिभिन्न ब्याजहरू कमाउन सक्छ, सबैभन्दा प्रतिष्ठित ग्रान्डमास्टर हो।
Night. दुःस्वप्न खानी
यो एक खनन सुविधा प्रदर्शन गर्दछ जुन जोम्बिस द्वारा आक्रमण गरिएको थियो जो एक पटक खानीमा थिए तर यी जीवहरूमा परिणत भयो, र उनीहरूले तपाईंको दिमाग खान चाहन्छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको तिनीहरूलाई प्रचार गर्नबाट रोक्न हो र तपाईंको दिमाग अक्षुण्णको साथ यस ठाउँबाट उम्कनको लागि बाटो पत्ता लगाउनु हो।
यो सपनाको राति खानी खानाहरू अन्य रोब्लक्स डरावना खेलहरू भन्दा फरक छन्। यो जो एक डराउने खेल मा अधिक कार्य चाहिन्छ को लागी लाभदायक छ। तपाईं आज खनिज शहर रोबलोक्सिया कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ। अधिकतम players खेलाडीहरूले सँगै खेलको मजा लिन सक्छन्।
यो एक मल्टिप्लेयर खेल हो जसमा एक खेलाडी माइनमा आठ अन्य खेलाडीहरूसँग फँसिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा डरलाग्दो खानी खेलमा एक रोमाञ्चक कार्य स्थापित गरेर रोब्लक्स र माइनक्राफ्ट बीचको अन्तरलाई संकुचित गर्दछ। तिनीहरू दुबै खेलाडीहरूको कल्पनाको लागि उपजाऊ मैदान प्रदान गर्छन् जसले आधार ग्राफिक्समा उडान उडान AAA खेलहरूको सट्टामा उडान गर्दछ।
7. ज़ोंबी रश
यो डिसेम्बर २०१ in मा सुरू भएको बीकन स्टुडियोद्वारा विकसित गरिएको एक जोम्बी वार रोब्लक्स खेल हो। एक खेलाडी लाम्बिजबाट प्रभावित नभई आफ्नो हतियारहरू प्रयोग गरेर अन्तिमसम्म बाँच्न आवश्यक छ। एक खेलाडी टाउको मा zombies शूटिंग द्वारा अधिक EXP प्राप्त गर्न सक्दछ किनकि यसले अधिक क्षति दिन्छ।
ज़ोंबी रश एक अनौंठो, रोबलोक्स डरावना खेल हो। तपाईं जोम्बिज शूट गर्न बन्दुकहरू प्राप्त, र यो साथीहरु संग काफी रमाईलो छ। लाशहरूले तपाईंलाई आक्रमण गर्नेछन्। यदि तिनीहरू धेरै सावधान भएनन् भने गेमरहरू तिनीहरूको स्वास्थ्य गुमाउनेछन्।
यसले लेभलिंग प्रणाली समावेश गर्दछ र प्राप्त गरेको हत्याको स records्ख्या रेकर्ड गर्दछ।
यसले स्तर अपग्रेडिंगसँग मार्ने काउन्टको आधारमा केहि हतियारहरू खोल्नको अद्वितीय गुण प्रदान गर्दछ।
The. बिहान हुनुभन्दा अघि
एक वायुमण्डलीय डरावनी खेलमा कणहरू, ध्वनिहरू, र गेमप्लेको एक उत्तम मिश्रण छ जुन एक अद्वितीय रोब्लक्स अनुभव सिर्जना गर्न मिल्छ। रोब्लक्स डरावना खेल अब एक उत्तरकथा छ। ग्राफिक्स राम्रो र अधिक रमाईलो छन्। यो एकल gameplay रुचाउनेहरूका लागि एकदम रमाईलो छ।
तपाईं यो डरावना कथा 8 जना व्यक्तिहरूसँग पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। इमर्सिभ ध्वनि अनुभवले खेललाई अधिक भयावह बनाउँछ।नयाँ संस्करण भर्खरको रिलीज हो। तपाईं बिहान हुनु भन्दा पहिले धेरै स्पाइकहरू अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ।
यसले एउटा इमर्सिभ वातावरण सिर्जना गर्न अनुकूलन कणहरूको प्रयोग गर्दछ, जस्तै नक्शाको भुइँहरू ढाक्ने कुहिरो, हिउँ नक्शामा हिमस्खलन, प्रकाशको साथ कणहरू मिलाउँदा खेलाडीहरूको लागि रातमा टाढाको कुरा अझ गाह्रो बनाउन।
यो एक मल्टिप्लेयर खेल हो जसमा खेलाडीहरू या त बचेका रूपमा खेल्छन् (बिहान सम्म बाँच्दछ), नायक, वा स्लेशर।
Ear। भालु अल्फा
यो हाल अल्फा चरणमा डराउने मल्टिप्लेयर रोब्लक्स खेलहरू मध्ये एक हो जसमा १० खेलाडीहरू मध्ये एक हो, बेतरती रूपमा भालुको रूपमा चयन गरिएको छ, र बाँकी बचेकाहरू। भालुले प्रत्येक बाँचेकलाई surv मिनेट भित्र मार्नु पर्छ। खेल एकदम आवश्यक छ जब यो डिजाईनको कुरा आउँदछ।
रमाईलो हुन्छ जब तपाईं समयरेखामा हतियारहरू थप्नुहुन्छ। तपाईलाई वेबसाइट अन्वेषण गर्न त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। खेल नियमित रूपमा नयाँ अद्यावधिक हुन्छ। तपाईले प्रत्येक महिना धेरै नयाँ नक्शा देख्न सक्नुहुन्छ।
डार्क वातावरण, डरावनी साउन्डट्र्याकहरूको बीचमा रातो एक्सेंटको साथ, यस खेललाई साँच्चिकै डरावना बनाउँदछ।
बचेकाहरूको तुलनामा, भालुसँग धेरै आवाश्यक फाइदाहरू छन्।
१०. हत्या रहस्य २
यो निकिलिसले सिर्जना गरेको एक डरावनी खेल हो। एक खेलाडी मासूम, एक शेरिफ, वा एक हत्यारा हुन सक्छ।मासूमहरू दगुर्छन् र हत्याराबाट लुक्छन् र आफ्नो जासूस कौशल प्रयोग गरेर हत्याराको पर्दाफाश गर्छन्। शेरिफले निर्दोष व्यक्तिलाई हत्यारालाई तल झारेर मद्दत गर्दछ किनकि उसको हतियार छ।
हत्याराले सबैलाई मेटाउँछ र शेरिफको शटहरूबाट आफूलाई जोगाउँछ। हत्या रहस्य खेलको फरक नक्शा छ। तपाईं रहस्य निराकरण गर्दा अद्वितीय सेटिंग्स मा हुन सक्छ। रमाईलो सुरु हुने बित्तिकै प्रयोगकर्ताहरूलाई भूमिका तोकिन्छ।
एक सर्भरले एक हत्यारा, एक शेरिफ, र अधिकमा दस निर्दोषको साथ १२ खेलाडीहरू समायोजन गर्न सक्दछ।
यसले तीन मोडहरू प्रस्तुत गर्दछ: क्याजुअल, हार्डकोर, र एसेसिन। यी मोडहरू कुनै पनि समय प्लेयर द्वारा स्विच गर्न सकिन्छ।
रोब्लक्स डरावना खेलहरूको भविष्य स्कोप:
यसको खेलहरूको बढ्दो बढ्दो लोकप्रियताको साथ, रोब्लक्स कडा परिश्रम गर्दछ प्रत्येक दिन यो निश्चित गर्दछ कि यो आफ्नो समुदायमा सबै भन्दा राम्रो खेल को अनुभव प्रदान गर्दछ। रोबलोक्सले कुनै ढु stone्गा छोड्दैन र यो नेलको टाउकोमा हिर्काउँदछ जब यो सबैभन्दा अधिक मनपराउने खेलाडीहरूको रूपमा अपडेटहरू मार्फत गुणात्मक परिवर्तन प्रदान गर्ने कुरा आउँछ। रोबलोक्स माइक्रोसफ्ट प्लेफैबसँग सहकार्य गर्दैछ, जुन यसको पूर्ण ब्याकएन्ड प्लेटफर्म हुन गइरहेको छ।
रोब्लक्सले स्टार क्रिएटर प्रोग्राम चलाउँछ जुन युट्युबर्सलाई उनीहरूको दर्शकहरूसँग साझा गर्नको लागि सिर्जनाकर्ता कोड दिएर अनलाइन गेमिंग प्रवर्धन गर्दछ। जब एक खेलाडीले उनीहरूको कोड प्रयोग गरेर रोब्लक्स खरीद गर्दछ, नाफाको अनुपात Youtubers को साथ साझा हुन्छ जसको कोड प्रयोग गरिएको छ। निश्चित रूपमा, रोबक्सले आउँदो भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय गेमि community समुदायलाई अर्को तहमा लैजान्छ।
रोब्लक्स डरावना खेलहरू नक्शाको पूर्ण नियन्त्रण लिनको लागि एक उत्तम तरिका हो। तपाईं धेरै स्पाइकहरू पाउन सक्नुहुन्छ र आफ्ना साथीहरूसँग थीमको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यस सूचीमा धेरै डरलाग्दा खेलहरू छन्। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंको उपकरणमा उनीहरूसँग रमाईलो गर्ने राम्रो अनुभव हुन्छ।
रोबलोक्स शर्ट टेम्पलेट्स विचारहरू
कसरी नि: शुल्क xbox लाईभ सर्वेक्षण छैन
डाउनलोड बिना नै नि: शुल्क वेबसाइट चलचित्रहरू
नेटफ्लिक्स अहिले काम गरिरहेको छ
युट्युब एमपी3संगीत भिडियो को लागी
पीसीबाट गूगल होममा संगीत कास्ट गर्नुहोस्
प्लूटो टिभी रिमोट कन्ट्रोल अनुप्रयोग